Naqshad: Sida loo xoqo bogga Webka Isticmaalida kormeerka Google Chrome
Sawir gacmeed (scrollbar) waa warqad akhrinaysa boggaga oo soo saara macluumaadka faa'iidada leh ee shabakada internetka.Xoqitaanka sawirku waa xalka kama dambaysta ah ee helitaanka macluumaadka dhabta ah ee bogaga internetka iyo bogagga shabakadda Microsoft Excel. Google Chrome Extension Scraper waa qalab xoogan sawir gacmeed oo ka shaqeeya labada Windows iyo Mac OS.
Waa maxay sababta Google Chrome Extension Scraper?
Google Chrome faaruqin dheeraad ah waa qalab shaashad sawir leh oo bilaash ah oo ku socota kumbuyuutarka Chrome. Tani qalab wax lagu jarayo ayaa lagu rakibay browserka Chrome sida plugin. Fidinta waxay u oggolaaneysaa bloggers iyo suuqgeyga in ay xogta ka helaan bogagga internetka iyaga oo isticmaalaya midig-guji midab. '' Xagasha isku midka ah '' waa inay ku soo baxaan shaashaddaada haddii aad xaq u tiriso midka.
XPath waa luuqad barnaamijka loo isticmaalo si loo helo macluumaad muhiim ah qaababka XML. Faylka HTML wuxuu tusaale u yahay qaabka XML. XPath waxaa badanaa loo isticmaalaa si loo doorto soodhada la beegsanayo. Xaaladdan, XPaths ayaa loo isticmaali doonaa si loo go'aamiyo qoraalka lagu soo saaro bogga internetka. XPaths ayaa sidoo kale kaa caawin doona in la aqoonsado magacyada iyo lambarada taleefoonka ee xubnaha baarlamanka.
Isticmaalidda Google Chrome ee xoqitaanka si loo helo faahfaahinta cinwaanka 349 iswiidhishka ah
Marka la eego Chrome's Scraper, ka saarista macluumaadka bogga internetka ma aha oo keliya oo fudud laakiin sidoo kale waa cajiib. Waxaad ku raaxeysan doontaa habka iyo farsamada.
Websaydhku waxay ku taxan yihiin dhamaan xubnaha iswidhishka iyo cinwaanadooda. Si aad u bilawdid, ku dhufo mid ka mid ah Xildhibaan kasta oo dooro "Xagaygaan oo kale. "Waa inaad aragto bandhigga soo socda ee shaashaddaada.
Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida loo sharraxo bogga bogga
Haddii aad midig ku gujiso hal MP iyo dooro "Kormeer walxaha," liiska xarafka ayaa la abuuri doonaa "" grid_6 alpha omega Raadinta natiijada cufnaanta "clas". Laba talaabo ayaa loo isticmaali doonaa si loo xoqo boggan. Tallaabada koowaad waxay ku jiri doontaa xulashada tiirarka oo ka kooban xogta MPs oo leh XPath. Tallaabada labaad waxay ku lug yeelanaysaa qaybo gaar ah oo xog ah sida magacyada xisbiyada, magacyada, iyo lambarka taleefanka oo ay abaabulaan xogta ku yaala tiirarka.
Ku qoto dheer dhismaha qaab-dhismeedyada hana ku dhejiyo hannaanka. Tilmaamee jumlada si aad u ogaatid tirada tirooyinka ku habboon ee ku lug leh waxyaabaha ku jira dhismahaaga. Aqoonsiga tag ee ugu dambeysa oo ka kooban xogta la beegsanayo. Ku dhaji imtixaanka XPath ee dhismaha adiga oo riixaya "Scrape. "
Liiska safka 349 saf ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashaddaada. 349 ayaa wakiil ka ah tirada guud ee xubnaha baarlamaanka Iswiidhan.
Xogta la soo bandhigay saldhigyada. Kormeer lambarka HTML ee bogga aad isticmaaleysey. Xaaladdan, qaybaha la soo saaro waa waqtigan xaadirka ah ee jaalaha ah. Ku dheji XPaths ee goobaha la abuuray oo guji "Xoqo" si loo kormeero plugin.
Haddii aad leedahay aqoon aasaasi ah ee XPaths, fahamka barnaamijka ma noqon doono hawl culus adiga. Tallaabooyinka kor ku xusan waxay kugu hagayaan sidaad u kantaroosho bogga bogga. Haddii aad ka shaqeyneyso inaad iska xoqdo bogagga internetka, waxaad u baahan tahay inaad leedahay xirfadaha barnaamijka Source .